Shashi Poudel – Page 43 – The Global
उक्त ‘वैध’ भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि गठित आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउने क्रममा अहिले वारोनशा वार्सी तानिएकी छन् । वारोनश वार्सीले लण्डनमा बस्दा भाडा तिरेर बसेको भन्दै एक रातको १६५.५० पौण्डका दरले रकम असुल गर्दै आएकी रहिछन् । एक सुत्रका अनुसार उनले कुनै भाडा तिरेर बसेको नभई एक पाकिस्तानी मूलका धनाढ्य तथा टोरी पार्टीको सहयोगी नवीड खाँकहाँ बस्ने गरेकी रहिछन् । र उनले त्यहाँ रात बसेवापत रकम नतिरेको खुलासा भएको छ । तर, खाँ स्वयंले वार्सीलाई खर्च असुल गर्न सघाएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । Continue reading →
PM Dr Babu Ram Bhattarai said in his announcement broadcast live over television. The government put security forces on high alert and riot police were patrolling the streets of the capital, Katmandu, though there were no reports of violence on Monday. Continue reading →
बर्तमान मिलीजुली सरकारको पिलोको एउटा सानो खिल निकट भविश्यमै निस्कने भएको छ, जुन खबरले प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरोन र उप प्रधान मन्त्री निक ल्केगलाइ खुसि तुल्याएको हुनु पर्छ । कन्टेवरीका आर्च विशोफ डा.रोआन विलिआम्स निकट भविश्यमै पद त्याग गर्दै छन् । गतबर्ष चर्च र प्रधानमन्त्रीवीच वाकयुद्ध भएको थियो । सामान्यतया चर्चहरु कन्जरभेटिभ चिन्तनका हुने हुंदा कन्जरभेटिभ सरकारको सर्मथन गर्ने हुन्छन् । अझ त्यसो भन्दा पनि जो हरेक हप्ता चर्चमा प्रार्थनाका निम्ति जान्छन् उनीहरुनै निर्वाचनमा भोट दिन जाने समुदाय हुन् र उनीहरुले प्राय जसो कन्जरभेटिभ पार्टीलाई भोट दिने गर्दछन् । चाहे अमेरिकामा होस्, फ्रान्स वा जर्मनीमा । तर बेलायती चर्च अफ इङ्गलैण्डका आर्च विशोफले भने मिलिजुली सरकारको भरपुर आलोचना गरे । Continue reading →
फ्रान्स, जर्मन, इटली, जापान, रसिया, क्यानडा र बेलायती नेताहरुलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले स्वागत गरे । Continue reading →